विधेयक पास हुने कुरा सभामुखमा निर्भर छ : विश्वकर्मा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्वमन्त्री एवम् सांसद मीन विश्वकर्माले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग नबदलिएको तर योगेश भट्टराईको स्वार्थ बदलिएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, “गोविन्द केसीका माग ठिक छन् भनेर सबैभन्दा पहिले हस्ताक्षर गर्ने पनि योगेश भट्टराई नै हो । रवीन्द्र अधिकारी र उहाँ हो नि पहिलो हस्ताक्षरकर्ता । त्यसपछि गगन थापाजी त तेस्रो, चौथौमा पुग्नुभएको हो ।”
उनले योगेश भट्टराईले सत्ताको कभर लगाएपछि विवेक गुमाएको पनि आरोप लगाए । उनले थपे, “प्रतिपक्षमा बस्दा एउटा कुरा, सत्तामा पुग्नेबित्तिकै अर्को कुरा । सायद मलाई लाग्छ, योगेशजी धेरै कुरामा ओलीजीसँग फेल भएको कारणले यो विषयमा पास गरेर देखाउने रहर पनि होला । गोविन्द केसीलाई फेल गराएपछि योगेशजी पास हुँला भन्ने होला । तर, विवेक प्रयोग गर्ने हो भने योगेशजी सरासर झुठ बोलिरहनुभएको छ ।”
विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको अभिभावक र राजनेता भएकोले सम्झौता गरेको विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “संसद्ले सर्वसम्मतबाट अनुमोदन गरेको विषयमा उनै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदहरुलाई उक्साएर सहमतिमा भएका बुँदाहरुलाई ठीक विपरित हुनेगरि अब उहाँले विधेयक ल्याउनुभयो । त्यो विधेयक संसद्मा पास भएन । नभएपनि संसद्मा पठाउने निर्णय गर्नुभयो । अनि समितिको घुमाउरो बाटोबाट आयो । समितिमा भएका सदस्यहरुले समिति बहिष्कार गर्नुहुन्न नि त । यस्तो खालको काइते कुरा गर्नुहुन्छ राजनेताहरुले ? ओली प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन, राजनेता हो । राजनेताले बोलेको कुरा, हस्ताक्षर गरेको कुरालाई ठट्टा मजाकमा पिकनिक जाने विषयजस्तो अथवा कहीँ घुम्न जाने विषयजस्तो बनाउनुहुँदैन ।”
संघीय सरकारले हेर्ने वा सरकारको मातहतमा रहने गठन आदेशका साथ प्रस्तुत गरिएका ११ वटा अस्पतालमध्ये ९ वटा अस्पताललाई मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृति दिएको र १० र ११ नम्बरका दुईवटा अस्पताल गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशिल कोइराला नाम भएको अस्पतालमा कुनैपनि निर्णय नभएकोले आफूहरुले विरोध गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “स्वास्थ्यमन्त्रीको यसमा कुनै बदनियत छैन । उहाँले स्पष्टताका साथ ११ वटा अस्पतालको नाम पेश गर्नुभएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्मा पास नहुनु भनेको त्यो मन्त्रीको जिम्मेवारी होइन । त्यसमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हो । प्रधानमन्त्रीले अहिले यी दुईवटा अस्पतालको बारेमा केही निर्णय हुँदैन भन्नुभयो । त्यसैले कम्युनिष्टहरु जे बोल्छन्, त्यो गर्दैनन् । जे गर्छन्, त्यो बोल्दैनन् भनेर हामीले भनेको हो ।”
माघ ११ गते बस्ने संसद् बैठकमा विधेयक पारित गर्ने तयारी भैसकेको छ, अब तपाईंहरु रोक्नुहुन्छ कि पारित गर्न दिनुहुन्छ ? भनेर सोधिएकोे प्रश्नमा उनले भने, “रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने कुरा परिस्थिति कस्तो सिर्जना हुन्छ ? सभामुखको कार्यशैलीमा पनि भरपर्दो रहेछ ।” उनले सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यशैली आफूहरुलाई चित्त नबुझेको पनि गुनासो पोखे । उनले भने, “सभामुखको कार्यशैलीमा सत्ताको अनुहार देखियो । हिजोको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक त ७ नम्बर थियो । १ देखि ६ सम्म उहाँले महत्वपूर्ण देख्नुभएन । माफिया अथवा कुनैपनि व्यक्तिसँग, चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी माफियाहरुसँग उहाँहरुको केही न केही गैरकानुनी कारोबार छ । अदृश्य कारोबार छ ।”